Al-Shabaab iyo ciidanka huwanta oo uu dagaal ku dhexmaray Qansax-dheere
December 28, 2012 - Written by Baydhabo:-Dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka DFS oo ay kaabayaan kuwa Itoobiya iyo Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay xalay degmada Qansax-dheere ee gobolka Bay oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada DFS iyo kuwa Itoobiya.
Dagaalka ayaa bilaawday ka dib markii ay ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen degmada Qansax-dheere ee gobolka Bay sida uu warbaahinta u sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka DFS ee gobalka Bay; dagaalka ayaa socday mudo ku dhow saacad waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Ilaa haatan Lama oga khasaaraha ka dhashay iska horimaadkii xalay ku dhexmaray degmada Qansax-dheere ciidamada huwanta iyo ciidamada Ururka Al-Shabaab
Ciidamada DFS iyo kuwa Itoobiya ayaa shalay la wareegay deegaanka Ow-diinle oo ka tirsan gobolka Bay ka dib markii ay ka baxeen ciidamadii Ururka Al-Shabaab .
Ururka Al-Shabaab ayaa wax ka badalay dagaalkii fool ka foolka ahaa ka dib markii culays melatari ay soo saareen ciidamada AMISOM kuwa Itoobiya oo labaduba kaalmeynaya ciidanka DFS waxayna dagaalkoodii u badaleen weeraro gaado ah .